काठमाडौं – परिवार नियोजन स्थायी बन्ध्याकरण कार्यक्रमको झन्डै आठ करोड बजेट एनजिओलाई बाँड्न चलखेल भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले नियमविपरीत गैरसरकारी संस्थालाई बन्ध्याकरणका नाममा रकम बाँड्ने तयारी गरेको विवरण फेला परेको छ। घुम्ती सेवाको स्थायी बन्ध्याकरणसहित शिविर सञ्चालनसम्बन्धी विज्ञता भएका संस्थाबाट र दरभाउ रेटपत्र लिई एनजिओलाई बजेट निकासा गर्नेगरी परिवार […]
कालिकोट – नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ की दुरी विकले एक सातासम्म निरन्तर रगत बग्दा पनि कसैलाई खबर गरिनन्। उनी ४ महिनाकी गर्भवती हुन्। दुरीको समस्या जटिल बन्दै गएपछि मात्र पति अम्मरेले जानकारी पाए। उनले पत्नीलाई कुमालगाउँस्थित स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याए। उनको समस्या निरन्तर बढ्दै गएपछि त्यहाँका हेल्थ असिस्टेन्टले जिल्ला अस्पताल कालिकोट रेफर गरे। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा […]
काठमाडौँ – देशमा नर्सहरुको बेरोजगारीको सीमा नाघेको छ । ६६ प्रतिशत नर्स बेरोजगार छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा कुल ८५ हजार आठ सय ६ नर्स दर्ता भएकोमा २५ हजारले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । काउन्सिलका अनुसार सात हजार नर्स रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् । काउन्सिलमा दर्ता भएका पाँच हजार नर्सको मृत्यु भइसेको छ । ४८ […]
काठमाडौं – आफू नजिकै खोकी रहेको व्यक्ति छन् भने सजग हुनुहोस्। खोकी लाग्नु भाइरसको संक्रमण हो। भाइरसका कारण हुने संक्रमण नै इन्फ्लुएन्जा हो। यसलाई फ्लु पनि भन्ने गरिन्छ। भाइरसका कारण हुने मौसमी रुघाखोकीले अहिले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई सताएको छ। खोकी लागिरहने, नाकबाट पातलो सिंगान आउने र ज्वरो आएपछि अस्पताल धाउने बिरामीको संख्या दिनहुँ सय […]
कति घण्टा सुत्नु बेश ?
काठमाडौं – शरीरलाई चंगा बनाउन दिनहुँ सातआठ घन्टा सुत्नु आवश्यक छ भनिन्छ। अर्कातिर, आवश्यकताभन्दा बढी सुत्नु पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्न । यसले गर्दा ज्यान जाने खतरासमेत हुन सक्छ । अध्ययनअनुसार राती सातआठ घन्टाभन्दा वढी सुत्नेलाई मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ । यो मृत्युको खबर पनि हुनसक्छ । राती ६ घन्टाभन्दा कम र […]
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरी गुणस्तरहीन दूध बेचे जेल
काठमाडौँ – मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरी न्यून गुणस्तरको दूध बेचे पाँच वर्ष जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। सरकारले दूध उत्पादक तथा बिक्रेतालाई जवाफदेही बनाउँदै उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ्य दूध उपलब्ध गराउने ध्येयले दूध मापदण्ड कार्यान्वनयमा ल्याएको छ। सबैले उपभोग गर्ने दूधको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड तोकिएको […]
सिर्दीबास (गोरखा) – पछिल्लो समय बिरामी पर्नासाथ उपचार गर्ने चेतना बढिरहेको छ। तर गोरखामा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँ बिरामी भए नुनको पोको ढोकामा झुन्ड्याएर देउता पुकारिन्छ। हिमाली भेगको चुमनुब्री गाउँपालिका-३ सिर्दीबासमा कोही बिरामी परे नुनको पोको ढोकामा झुन्ड्याउने पुरानो प्रचलन अझै यथावत् छ। धामीले जोखाना हेरेपछि देवता लागेको भने ढोकाभित्र र भूत लागेको भने […]
काठमाडौं – महिनावारी स्वास्थय व्यवस्थापनसम्बन्धी बृहत् परामर्श कार्याशाला गोष्ठी मंगलबार सम्पन्न भएको छ । मेन्स्टुएक्सन विश्रामका लागि समय छैन, प्रत्येक नेपाली किशोरी महिनावारीका बेला अघि बढ्न सकुन् भनेर सुनिश्चित गरौँ विषयक उक्त गोष्ठीमा छोरी मान्छे १० बर्षदेखि १६ बर्षको हुँदा पहिलोपटक महिनावारी चक्र शुरु हुने बताईएको छ । कार्यक्रममा कोलम्बियाका युनिभर्सिटीकी डा. मेरनी शोभरले महिनावारी […]